Horjoogeyaasha al-Shabaab oo lagu laayay weerar cirka ah
Ururka diinta Islaameed ku been abuurtay ee al-Shabaab waxaa waayahaan dambe soo gaaray jab dhan milatari iyo mid dhaqaaleba iyadoo jabkii ugu dambeeyay uu yahay weerar duqeyn dhanka cirka ah kaasoo lagu laayay dhowr xubnood oo ka tirsan ururka oo ay ka mid yihiin horjoogeyaal sar-sare oo ka dhacay magaalada Beledweyne.
Weerarkaas kaddib waxaa lagu soo warramayaa in ururka dilaaga ah ee al-Shabaab uu u diiday dadweynaha inay ka baxaan ama soo galaan magaalada si ay u qariyaan khasaaraha iyo jabka weyn ee soo gaaray.
Degaanka Ceel-dheer ayaa waxaa maalmahan kulamo ku lahaa qaar ka mid ah horjoogayaasha al-Shabaab, iyadoo shirarkoodana ay ka war heleen dowladaha saaxiibbada la ah Soomaaliya, kuwaasoo Ciidanka Xoogga Dalka ka caawiya la dagaallanka al-Shabaab.
Degaankaan Ceel-Dheer ayaa ah halka ay al-Shabaab gaystaan Xoolaha ay ka dhacaan Dadka Shacabka ah ee ku nool Gobalka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Sidoo kale, horjooge al-Shabaab ah oo ururka u xil-saarnaa uruurinta canshuurta sharci-darrada ah ayaa dhawaan lagu dilay gobalka Shabeellada Hoose.